कस्तो रहयो ०६९ साल?
Sunday, 14 April 2013 14:03	नागरिक
काठमाडौं, वैशाख १ (नागरिक)- गएको साल २०६९ मा फिल्म उद्योगमा खासै कुनै चमत्कार भएन। फिल्म चलेनन् तर निर्माण संख्या पनि घटेन। त्यसैले कलाकारहरु न धेरै दुःखी छन् न खुसी। अभिनेताअभिनेत्रीहरुको वर्ष सामान्य बित्यो। गीतसंगीत उस्तै रहयो। कुनै परिवर्तन वा नयाँ स्टार जन्मिएनन्। सेलिब्रिटी आफैं चाहिँ कसरी गर्छन् त ६९ सालको समीक्षाः
२०६९ सालमा झन्डै आधा दर्जन फिल्म खेलियो। सबै रिलिज हुन बाँकी छ। धेरै फिल्म खेले पनि पारिश्रमिक चाहिँ अहिलेसम्म उठाउन सकेकी छैन। दुईजना ब्वाइफ्रेन्ड पनि बने। तर वर्षको अन्त्यमा दुवैसँग ब्रेकअप भयो। ब्वाइफ्रेन्डकै कारण अभिनेत्री भइयो। अहिले अन्योलमा परेको छु। रिलिज हुने फिल्मले दिने नतिजा कुर्दैछु। राम्रो भएन भने फिल्म छाडेर विदेशतिर जान्छु। नेपालमा बसें भने विज्ञापन र म्युजिक भिडियो चाहिँ गर्छु। फिल्ममा काम गर्दा सोचेर गर्छु।
आर्यन सिग्देल, अभिनेता
फिल्म उद्योग सेलाइरहेको बेला हो, खासै राम्रो रहेन यो साल। फिल्मका नियमित काम गरियो। केही रिलिज भए। वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा फिल्म क्षेत्रबाट टाढिएको हो कि जस्तो महसुस भयो। यो वर्ष खासै फिल्महरु चलेन। यसले हामी कलाकारहरुलाई पनि तनाव थपिदियो। व्यापारमा पो हात हालुँ कि जस्तो लागे पनि आँट गर्न सकिएन। चलिहाल्छ भन्ने हिसाबमा ध्यान दिएँ। तैपनि मैले गरेको कामप्रति खुसी छु।
मनीषा विष्ट, मोडल
यस वर्ष मोडलिङसम्बन्धी धेरै कार्यक्रममा व्यस्त भएँ। सुरुदेखि र्‍याम्प शो भ्याइनभ्याइ भयो। त्यस्तै बाघ संरक्षण सम्बन्धी प्रोजेक्टहरु गरियो। काम सिक्ने र सिकाउने दुवै काम भए। फिल्मको अफर आए पनि खासै ध्यान दिन पाइन। अफिस र र्‍याम्प शोले गर्दा फिल्मतिर काम गरिएन। नयाँ सालमा राम्रो फिल्मको अफर र समयले भ्याए भने गर्ने योजना छ। कार्यक्रम धेरै भए पनि आयोजकले पारिश्रमिक खासै बढाइदिएनन्। आधा दर्जन शो गर्दा कमाइ ठिकै भयो।
यो वर्ष फलिफाप धेरै भयो। मण्डला थियटरको हल निर्माण गरियो। धेरै फिल्ममा काम गरियो। नयाँ नाटकको निर्देशन भ्याएँ। छोरा जन्मियो। नयाँ वर्षमा चाहिँ दुइटा नाटक निर्देशन गर्ने भन्ने सोचेको छु। त्यसबाहेक नाटकघरलाई व्यवस्थित बनाउँछु भनेर सोचेको छु। आशा गरिएको 'छड्के' फिल्मले निराश बनाइदियो। त्यस्तै 'बधशाला' पनि रिलिज हुन सकेन। हल्का बिमारी समेत परियो। नयाँ साल राम्रो हुन्छ भन्ने आशमा छु।
शशि रावल, गायिका
धेरै सालपछि एल्बम रिलिज गर्ने अवसर मिल्यो। दुःख गरेर एल्बम रिलिज गरे पनि वर्षको अन्त्यमा आएर राम्रा प्रतिक्रिया पाएँ र कार्यक्रममा व्यस्त भइयो। एल्बममा खर्च जुटाउन हल्का अप्ठ्यारो पर्‍यो। त्यस्तै मेरो ड्रिम प्रोजेक्टको सुरु गर्ने मौका मिल्यो। फोहोरमैला सम्बन्धी काम गर्न संस्था खोले। बिस्तारै राम्रै काम गरिरहेको छु भन्ने महसुस भएको छ। नयाँ वर्षका लागि कार्यक्रमहरुका अफर आइरहेका छन्। यसवर्ष स्कुटी दुर्घटना धेरै भयो। घाइते भएर आराम समेत गरेँ।
वर्षको सुरुदेखि कार्यक्रममा व्यस्त भएँ। त्यसबाहेक झन्डै दुई सय गीत रेकर्ड गरियो। जापान, इजरायल, कतार, मलेसिया र कोरिया लगायत देशका कार्यक्रममा लगातार व्यस्त भएँ। राम्रै कमाइ भयो। सोचेजस्ता गीत चाहिँ गाउन पाइएन। त्यस्तै बाग्लुङको कार्यक्रम सिध्याएर पोखरा फर्किदा दुघर्टनामा परेँ। झन्डै १५ दिन आराम गर्नुपर्‍यो। नयाँ वर्षमा राम्रा गीत पनि गाउन पाइयोस् भन्ने इच्छा छ। वर्षको अन्त्यमा एल्बम रिलिज गरेकोले प्रमोसनमा समेत व्यस्त भइरहेको छु।
आयोजकलाई धम्की आएको भन्दै राखी सावन्तको कार्यक्रम स्थगित (2013-04-13)
एकैदिन 'हमेशा' र 'नोटबुक'को टक्कर (2013-04-12)
फिल्मकर्मीलाई चुनावी गर्मी (2013-04-12)
आजदेखि मण्डलामा सर्ट फिल्म फेस्टा (2013-04-12)
'मैले पाएँ भने बलिउडको नाम फेर्छु' (2013-04-11)
नयाँ वर्षको दिन रंगशालामा राखी छमछमी नाच्ने (2013-04-10)
हलले साथ दिएन 'भिजिलान्ते'लाई (2013-04-07)
करिना कपुरलाई निजी विमान ! (2013-04-06)
कुन हिरोइनले कति खर्च गर्छिन् ? (2013-04-05)
शाहरुखविरुद्ध मनोज कुमारको मुद्दा (2013-04-05)